Izicelo Ngokubanzi ze-Cooling Tower
Imibhoshongo yokupholisa isetshenziselwa ukufudumeza, ukungena komoya, nomoya opholisayo (i-HVAC) nezinhloso zezimboni. Inikeza ukusebenza ngendlela engabizi futhi eyonga amandla izinhlelo ezidinga ukupholisa. Izikhungo zezimboni ezingaphezu kuka-1500 zisebenzisa amanzi amaningi ukupholisa izitshalo zazo. I-HVAC ...
Ezinkampanini zezimboni ezisebenzisa umbhoshongo wokupholisa indawo yayo, uhlobo oluthile lokupholisa amanzi embhoshongweni wokupholisa amanzi kuyadingeka ukuze kuqinisekiswe inqubo esebenza kahle nempilo yokusebenza isikhathi eside. Uma amanzi okupholisa wombhoshongo eshiywa engalashwa, ukukhula okungokwemvelo, ukungcolisa, ukukala nokugqwala kungakwazi ...
Isingeniso Esiyisisekelo Sokupholisa Towers
Umbhoshongo wokupholisa uyisishintshisi sokushisa, ngaphakathi kwawo ukushisa kukhishwa emanzini ngokuxhumana phakathi kwamanzi nomoya. Imibhoshongo yokupholisa isebenzisa ukuhwamuka kwamanzi ukwenqaba ukushisa okuvela ezinkambisweni ezinjengokupholisa amanzi ajikelezayo asetshenziswa ekuhlanzweni kukawoyela, izitshalo zamakhemikhali, izitshalo zamandla, insimbi mil ...